Lalatiana Rahariniaina RSS
Tahiry isam-bolana Avrily 2014 1 Lahatsoratra Oktobra 2013 1 Lahatsoratra Septambra 2013 1 Lahatsoratra Febroary 2013 1 Lahatsoratra Jolay 2012 1 Lahatsoratra Oktobra 2011 2 Lahatsoratra
Mey 2011 1 Lahatsoratra Desambra 2010 1 Lahatsoratra Novambra 2010 4 Lahatsoratra
Nanomboka nandika tamin'ny 07 Oktobra 2010 · 13 Lahatsoratra
@ariniaina	imailaka Lalatiana Rahariniaina	Lahatsoratra farany an'i Lalatiana Rahariniaina 22 Avrily 2014
Fantaro i Mamy sy i Zo, mpandrindran'ny Global Voices amin'ny teny Malagasy Mpanoratra Thalia Rahme · Afrika Mainty I Mamy sy Zo dia manazava ny olana sedrain'izy ireo amin'ny maha-mpandika lahatsoratra azy ireo izay mamokatra ny vaovao farany sy mitazona ny fenitra avon'ny teny Malagasy.
Zaza iray Amin'ny Telo Maneran-tany No Tsy Manana Soram-piankohonana Mpanoratra Bah Abdoulaye · Afrika Mainty Ny tsy fisian'ny kopia nahaterahana dia mety midika fa ny zaza dia tsy afaka hisoratra anarana any an-tsekoly na mahazo fitsaboana. Tafatafa niaraka tamin'i Evelina Martelli, lehibe mpitantana ny BRAVO!, tetikasa mamporisika ny fanaovana kopia nahaterahana.
Mivondrona ny artista breziliana hanavotana ny liona any Kenià Mpanoratra Fernanda Canofre · Tselatra · Afrika Mainty 20 Febroary 2013
Oganda: Aretina Mampihozona Loha Tsy Mamela Ny Ankizy Hanana Ny Ho Aviny Mpanoratra James Propa · Afrika Mainty James Propa dia mizara sary sy lahatsary YouTube momba ny zavatra ateraky ny aretina mampihozona loha any Oganda. Ny aretina mampihozona loha dia aretina mampalemy ara-batana sy ara-tsaina ary ny ankizy no tena voan'izy ity. Faritra kely ihany ao Atsimon'i Sodana, Tanzania ary Avaratr'i Oganda no misy an'izy ity amin'izao.
Okraina: Ny Filoha Yanukovych Ao Anatin'ny The Simpsons? Mpanoratra Tetyana Bohdanova · Eoropa Afovoany & Atsinanana Ny tantara farany nivoaka tamin'ilay andian-tsarimiaina The Simpsons dia nieli-patrana tany Okraina noho izy nanao kisarisary mampihomehy momba ny firenena sy ilay jiolahy mafia any Kiev antsoina hoe Victor, izay, araka ny navoitran'ny mpiondana aterineto, dia mitovy amin'ny Filoha Okrainiana Viktor Yanukovych.
Blog Action Day 2011: Andao Hiresaka Momba Ny Sakafo Mpanoratra Diego Casaes · Fampandrosoana Ny Blog Action Day dia hetsika fanao isan-taona izay iarahan'ireo mpitoraka bilaogy eran-tany manoratra mikasika ny olana iray ao anatin'ny andro iray. Ny lohahevitra amin'ity taona ity dia ny sakafo, satria ny Blog Action Day dia mifandraika amin'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny sakafo, hetsika iray karakarain'ny Sampan'ny Firenena Mikambana momba... 19 Mey 2011
Tonizia: Miverina indray ny Sakana amin'ny Aterineto Mpanoratra Afef Abrougui · Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana Ny mpampiasa aterineto Toniziana dia afaka niditra ankalalahana tamin'ny Aterineto, tao aorian'ny nienjeran'ny fitondran'i Ben Ali tamin'ny tapaky ny Janoary sy ny niafaran'ny sakana amin'ny vohikala nisy teo aloha. Toa hifarana anefa ity volan-tantely fohy ity, noho ny baiko azo vao tsy ela izay, avy amin'ny fitsarana miaramila mba hanakanana... 03 Desambra 2010
FOKO: Fitsapan-kevi-bahoaka momba ny Lalam-panorenana sy fanonganam-panjakana tsy nahomby Mpanoratra Rezwan · Mandalo fotoana mikorontana i Madagasikara. Tao aorian'ny 20 volana niovan'ny fitondrana, dia noheverin amin'izay ny fiverenana amin'ny rafitra araka ny Lalampanorenana. Notontosaina tamin'ny 17 novambra teo ny referendum izay nifandirana tokoa momba ny Lalampanorenana vaovao. Feno tsy fanarahan-dalàna sy saron'ny fanonganam-panjakana tsy nahomby moa ilay fifidianana. Mpitoraka bilaogy vitsivitsy mpikambana ao amin'ny...
Teknolojia ho an'ny Mangarahara: Andraikitry ny Governemanta any India Mpanoratra Renata Avila · Azia Atsimo Aretina mikiky izao tontolo izao ny kolikoly ary mahakasika na ny firenena mandroso na firenena andalam-pandrosoana, ny sehatra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana, ary ny fikambanana tsy mitady tombony ara-bola sy mpanome fanampiana. Navoitran'ny tatitra isan-taona an'ny Transparency International tamin'ny 2010 vao tsy ela izay fa mila mampiditra fepetra...